Ná Pilato Pɛ Sɛ Ɔgyaa Yesu | Yesu Asetena
NÁ PILATO PƐ SƐ ƆGYAA YESU
YUDAFO NO KAA SƐ PILATO NNYAA BARABA MMOM
WƆDII YESU HO AGORƆ YƐƐ NO AYAYADE
Pilato ka kyerɛɛ nnipakuw a wɔpɛ sɛ wɔkum Yesu no sɛ: “Manhunu nnyinasoɔ biara wɔ deɛ mode bɔɔ onipa yi soboɔ no mu. Nokorɛm no, Herode nso anhunu bi.” (Luka 23:14, 15) Esiane sɛ na Pilato pɛ sɛ ɔgyaa Yesu nti, ɔfaa adwene foforo. Ɔka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Mowɔ amanneɛ sɛ twam duru a megyaa onipa baako ma mo. Enti mopɛ sɛ megyaa Yudafoɔ hene no ma mo anaa?”​—Yohane 18:39.
Ná Pilato nim sɛ korɔmfo bi a wɔfrɛ no Baraba da afiase saa bere no. Ná wabɔ korɔno mu safohene, na na ɔyɛ owudifo a ɔtutu ɔman ase. Enti Pilato bisaa sɛ: “Wɔn mu hwan na mopɛ sɛ megyaa no ma mo, Baraba anaa Yesu a wɔse wɔfrɛ no Kristo no?” Asɔfo mpanimfoɔ no tutu guu nkurɔfo no asom ma wɔteateaam sɛ, ɔbɛgyaa Yesu paa deɛ, ɛnde ɔnnyaa Baraba mmom. Pilato san bisaa sɛ: “Wɔn mmienu no mu hwan na mopɛ sɛ meyi no ma mo?” Nkurɔfo no teateaam sɛ: “Baraba.”​—Mateo 27:17, 21.
Asɛm no yɛɛ Pilato nwonwa, enti ɔbisaa nkurɔfo no sɛ: “Ɛnneɛ ɛdeɛn na menyɛ Yesu a wɔfrɛ no Kristo no?” Nkurɔfo no teɛteɛɛm denneennen sɛ: “Ma wɔmmɔ no asɛndua mu!” (Mateo 27:22) Awerɛhosɛm ne sɛ, onipa a ɔnyɛɛ bɔne biara na na wɔrepɛ no akum no. Pilato bisaa nkurɔfo no sɛ: “Adɛn, bɔne bɛn na onipa yi ayɛ? Menhunu biribiara wɔ ne ho a ɛsɛ owuo; enti mɛtwe n’aso na magyaa no.”​—Luka 23:22.
Pilato yɛɛ biara sɛ ɔbɛgyaa Yesu, nanso ɛdɔm no teateaam guu ne so denneennen sɛ: “Ma wɔmmɔ no asɛndua mu!” (Mateo 27:23) Ná nyamesom mpanimfoɔ no ayɛ ama nkurɔfo no awe ahinam so sɛ wɔbɛhwie mogya agu. Ná ɛnyɛ ɔbɔnefo anaa owudifo bi na wɔpɛ sɛ wɔkum no; ɛyɛ onipa a ɔnyɛɛ bɔne biara. Saa onipa yi ara nso, nnanum a na atwam no, wɔbɔ gyee ne so sɛ Ɔhene wɔ Yerusalem. Sɛ na Yesu asuafo no bi wɔ amrado aban mu hɔ mpo a, wɔanyi wɔn anim.
Pilato huu sɛ ɔrebrɛ gu. Ná nkurɔfo no reyɛ ayɛ basabasa, enti ɔde nsuo guu ade mu hohoroo ne nsa wɔ wɔn anim kaa sɛ: “Menni ɔbarima yi mogya ho fɔ. Mo ara monyɛ deɛ mobɛyɛ.” Ɛno mpo ammu nkurɔfo no abam. Mmom wɔkaa sɛ: “Ne mogya mmra yɛne yɛn mma so.”​—Mateo 27:24, 25.
Ná Amrado Pilato nim nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ, nanso na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nkurɔfo no apɛde ma wɔn. Enti ɔtiee wɔn gyaa Baraba maa wɔn. Afei ɔmaa wɔyii Yesu atade kaa no mpire.
Asraafo no hwee Yesu wiei no, wɔde no kɔɔ amrado aban no mu. Asraafo no nyinaa baa hɔ bɛkekaa nsɛnhunu kyerɛɛ no. Afei wɔde nkasɛɛ-nkasɛɛ nwenee abotiri, na wɔpia hyɛɛ ne ti. Ɛnna wɔde demmire bawee bi hyɛɛ ne nsa nifa mu, na wɔhyɛɛ no atade tenten kɔkɔɔ bi te sɛ ɔdehye. Afei wɔdii ne ho fɛw kaa sɛ: “Asomdwoeɛ nka wo, Yudafoɔ Hene!” (Mateo 27:28, 29) Wɔtetee ntasuo nso guu Yesu so bobɔɔ n’ani so. Ɛnna wɔgyee demmire no fii ne nsam de bɔɔ nkasɛɛ “abotire” tantan a wɔde ahyɛ no no so, na nkasɛɛ no wurawuraa ne tirim.
Sɛ obi na wɔyɛɛ no saa a, anka ɔntumi koraa, enti Pilato hwɛ sɛnea Yesu atumi afa mu a wammɔ wa koraa no a, na ɛyɛ no nwonwa. Ɛno maa ɔyɛɛ sɛ ɔbɛfa kwan foforo so ayi ne ho afiri asɛm no mu. Ɔkaa sɛ: “Hwɛ! Mede no refiri adi abrɛ mo na moahunu sɛ menhunu ne ho mfomsoɔ biara.” Saa bere no, na wɔahwe Yesu apirapira no ama mogya retu no, enti ɛbɛyɛ sɛ na Pilato dwen sɛ ɔde no ba abɔnten a, ɛbɛma nkurɔfo no ahu no mmɔbɔ. Nanso na nkurɔfo no nni ahummɔborɔ ketekete sɛɛ mpo, na bere a Pilato de Yesu bɛgyinaa wɔn anim no, ɔkaa sɛ: “Hwɛ! Onipa no nie!”​—Yohane 19:4, 5.
Ná wɔahwe Yesu apirapira no, nanso wankeka mu anteatea mu anyɛ hwee, na ɛbɛyɛ sɛ ɛkaa Pilato koma paa, efisɛ nsɛm a ɔkae no kyerɛ sɛ na ɔbu Yesu, na na ɔyɛ no mmɔbɔ nso.
Ɛkwan a na Romafo fa so ka nkurɔfo mpire no, Oduruyɛfo William D. Edwards kyerɛkyerɛɛ mu wɔ ne nwoma bi mu. (The Journal of the American Medical Association ) Ɔkaa sɛ:
“Dua tiatia bi (wɔfrɛ no flagrum anaa flagellum) a wɔde aboa nwoma teaa asɔ so na na wɔde ka nkurɔfo mpire. Ɛtɔ da a, aboa nwoma no yɛ baako na ɛtɔ da nso a wɔnwene mmienu anaa nea ɛboro saa de sɔ [abaa no] so. [Mpire] biara ne ne tenten, na na wɔtaa de nnade nketenkete anaa nnwan nnompe nketenkete hyehyɛm. . . . Sɛ Roma asraafo no sɔ obi mu sɛ wɔrehwe no a, wɔde mpire no bɔ n’akyi denneennen ma nnade a ɛhyehyɛ mu no beabea n’akyi. Afei aboa nwoma no ne nnompe a ɛhyehyɛ mu no ma ne honam paapae. Sɛ wɔhwe no ara du baabi a, ɛtete honam no kɔ mu ma mogya pram no.”
Ɛkwan bɛn na na Pilato pɛ sɛ ɔfa so gyaa Yesu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔno Pilato ho remma asɛm?
Dɛn na na wɔde ka nkurɔfo mpire? Sɛ wɔka obi mpire a na ɛte sɛn?
Wɔhwee Yesu wiei no, dɛn bio na wɔde yɛɛ no?